UHulumeni waseKZN ethule i-Operation Vula eMgungundlovu – Sivubela intuthuko Newspaper
UMNU Ravi Pillay noMnu Sihle Zikalala bedlulisela isheke komunye ohlomule kwi-Operato Vala, ababukelayo iNkosi Phathisizwe Chiliza, uNdlunkulu Thobekile Maphumulo iMeya yaseMgungundlovu District noMnu Mzimkhulu Thebolla iMeya yaseMsunduzi
UHULUMENI waKwaZulu-Natal oholwa uNdunankulu uMnu Sihle Zikalala wethule uR300 million ngaphansi kwe-Operation Vula ukulekelela intsha ukusungula amabhizinini ngenhloso yokuziphilisa nokuxosha ikati eziko emakhaya.
I-Operation Vula yethulwe eMgungundlovu lapho uMnu Zikalala ethe inhloso yabo benguhulumeni wesifundazwe ngalesi sikhathi bafunau kuqinisekisa ukuthi kukhona imikhiqizo evela emalokishini nasemakhaya akulesi sifundazwe.
Lapha uMnu Zikalala obuye wadlulisela izinsiza kusebenza kwabebefake izicelo zokulekelelwa kwintsha yaseMgungundlovu kuhlanganisa okokupheka, izimoto, ama-computer nokusetshenzisa kwezolimo. Ube esexwayisa laba abathole uxhaso ukuthi lezi nsiza abazitholile kuyicala elibovu ukuzidayisa ngendlela yokuzenzela imali eceleni. Ucele laba abathole lolu xhaso ukuthi uma kwenzeka amabhizinisi abo engasimamai basize bazibuyisele emuva kuhulumeni izinsiza abazitholile.
Emasontweni ezayo uhulumeni waKwaZulu-Natal ehlanganisa amalungu e-Executive Council nongqongqoshe beminyango ehlukene uzohambela ezinye izifunda ukuyodlulisela uxhaso kwababefake izicelo zoxhaso ukuze nabo baqale basebenze emabhizinisini abo. “Ngalolu hlelo kuzohlomula amabhizinisi amancane angu-1000 okuyilawo amalungu awo abefake izicelo zokuxhaswa. Njengamanje sekuphumelele izicelo ezingu-1021 athola uxhaso olufinyelela kuR299 157 million. Kulezi celo eziphumelele ezingu-923 bezifafana okwenze ukuthi uxhaso lwazo kube ngolukaR200 000. Zikhona nezinye izicelo ezithole uxhaso lukaR200 000 kuya kuR500 000. Siyethemba ukuthi le Operation Vula izoba usizo njengoba izodala amathuba omsebenzi angu-10 816,” kusho uNdunankulu uMnu Zikalala.
UMnu Ravi Pillay ongungqongqoshe woMnyango wokuThuthukiswa koMnotho ezokuVakasha nezeMvelo esifundazweni obeyingxenye yokwethulwa kwale-Operation Vula eMgungundlovu uthi amabhizinisi amancane abamba elikhulu iqhaza ekusungulweni kwemisebenzi ukulekelela abantu abadla imbuya ngothi. Uveze ukuthi emazweni asethutthukile u-80% wamabhizinisi akhona kube ngamancane abambe iqhaza ekusimameni komnotho. Uthe nesifundazwe sizozuza kakhulu ngokulekelela osomabhizinisi abasafufusa ngokwehlisa ukuntuleka kwamathuba omsebenzi. Lamabhizinisi abexhaswa lapha u-42% asungulwe ngabantu abasha abangaphansi kweminyeka engu-35, bese kuthi u-49.5% ubhekwe ngabantu besifazane lokho okushayelwe ihlombe elikhulu. UMnu ZIkalala noMnu Pillay bathembise ukuthi kulaba abanezicelo ezingaphumelelanga bazolekelelwa kubhekwe ukuthi izicelo zabo kaziphumelelanga uma kwenzenjani